Kusvika kuGoogle Pamusoro naSemalt
Webhusaiti yepamhepo inotonga iyo Kuita bhizinesi paInternet hakuna kufanana nekuita bhizinesi munyika chaiyo. Izvo zviri nyore uye zvakanyanya kuomarara. Kana iwe usingazive mitemo yenyika ino, iwe unozobuda nepahwindo. Kana iwe ukashandisa SEO optimization, bhizinesi rako richashanda like wachi. Kana iwe uri muridzi webhizinesi, muongorori webhizinesi, kana nyanzvi yekushambadzira, unogona kufarira kudzidza nezvenzira nyowani dzekushandisa zvinobudirira zvishandiso zvewebhu. Chero mhando yekugadzira mari, kana zviri pamutemo, inogona kusimbiswa, kuvandudzwa, uye kuvandudzwa kana iwe uchiziva mitemo yenzvimbo nzvimbo.
Ndinogona kusimudzira bhizinesi repamhepo ini pachangu?
Iwe wakanzwa nyaya nezvevanhu vakatanga yavo Internet bhizinesi kubva kutanga. Zvichida vakomana vanofara ava netsaona vakasimudzira mitemo yekusimudzira paWorld Wide Web. Iwe unonzwisisika uye neuchenjeri hwekuzvimiririra kuwedzera netiweki kutengesa kwe e-commerce? Chii chinofanirwa kuti novice muzvinabhizimusi azive? Ndekupi kwekuwana kufemerwa kwekuzvarwa kwemapurojekiti asina kujairika? Mukutsvaga ruzivo, iwe enda kunzvimbo dzakasiyana siyana dzeInternet. Kuratidzika kwemarudzi ese eruzivo kuri kukuwira. Iwe uchanyura mune zvakaomeswa uye nuances, uye usati wawana chero chiitiko, iwe uchave wakanyadziswa zana nguva mune chaiyo nzvimbo uye yayo isina magumo mikana.
Zvakanaka, nenzira iyi zvakare inogoneka. Iwe unogona kudzidza kubva pane imwe kosi, uchiibhadhara iyo ine peni yakaisvonaka. Chii chaunowana semhedzisiro? Iyo mirwi yezivo yakasviba inoda kuisirwa kune dzisina-mamiriro ezvinhu asina kurondedzerwa mune chero zvinyorwa. Uye zvekare, iwe uchatendeukira kumudzidzisi wako, uyo anokupa mhinduro yakajeka. Sei? Iyo inogona kuva kure nemamiriro ezvinhu ehupenyu chaihwo. Chii chaucharasikirwa nacho? Iwe ucharasikirwa nemazuva anokosha nemwedzi. Ino ndiyo nguva yemikana yako yakarasika. Sei? Bhizinesi rako niche richagarwa, uye iwe uchafanirwa kutsvaga mazano matsva nemikana mitsva. Wagadzirira tarisiro iyoyo?
Networking Zvishandiso Zvekubudirira
Vatengi vari kutarisa pazvitoro zvepamhepo zvemhando yekutenga yavanayo munyika chaiyo. Vanoda maitiro ega uye kutsigirwa kwepfungwa. Asi iwe chete haugone kushandira vese vashanyi kune yako chaiyo chitoro, kunyanya kana vachiuya panguva imwechete. Kana iwe usingakwanise kuwana kuvimba nevatengi nenzira yechisikigo, izvo zvekushambadzira zvinogona kusiiwa zvakanyanya. Ndokusaka muzvinabhizimusi wepamhepo achida vanhu vane ruzivo vanozo maneja zvinhu zvevanhu, pamwe nemidziyo inoshanda yekudzora.
Pasinei nekutungamira kwebhizinesi rako, iwe uchada seti inoshanda yeSEO zvishandiso uye nyanzvi dzinozobatsira mukumhanyisa bhizinesi rako. Kutengesa kunyange chinhu chakajairika paInternet hakusi nyore sezvazvinotaridza pakutanga. Ndokunge, kana iwe uchizotengesa foshoro kana purogiramu imwe, iwe uchazviita nekukurumidza. Asi ikozvino tiri kutaura pamusoro pekugara uye kuchikura kutengesa, kwaunofanira kuwana mukana wemakwikwi uye yakakwana vatengi rutsigiro.
Nekujeka uye nekukurumidza ruzivo rwekuwana ruzivo, yekutanga-kirasi software inoita basa rakakosha mukuvandudza bhizinesi. Kubudirira kuri kuwedzera kuri kuuya kumakambani epakati, uye kutanga ari kusimuka nemazano akanaka. Vanogona vatengi vanofamba vachitenderera musango kwenguva yakareba. Iwe unofanirwa kuve wakagadzirirwa kuzviuru zvevanhu vanoshamisika vanopfuura napo. Mumwe anogona kubaya mutengi nekufarira muhupenyu hwake hwezuva nezuva uye nematambudziko ake. Iyi pfungwa yekubatanidza brand inoda imwe yekutengesa mutemo uye kupfuurira kwako kupindira. Vanogona vatengi vanofanirwa kuve vakarererwa zvinyoro, vachikudziridza kuvimba kwavo mumhando yako.
Sangana Semalt Webhu Webhu
Zvishandiso zvepamhepo zvepamhepo zvinokwezva vatengi vatsva uye zvakanyanya kuwedzera mari yako. Huwandu hwavo hwakanyanya kukura, asi ese haapfuure nemuganhu wedunhu rakashirwa. Yedu yeDigital Agency inopa vatengi vayo kwete chete zvinobudirira zvekushambadzira maturusi, asiwo zano iro richakubvumidza iwe kuwedzera iwo mukana weinjini yekutsvaga. Kana iwe uchida kubuda mudunhu rako, nyika, nyika, kana kunyange kondinendi, une chishandiso chakavimbika. Ishandise kuti ive inozivikanwa pasi rese.
Semalt ichakutungamira munzira dzakavanzika dzeinjini dzekutsvaga, uchisarudza mazwi akakosha anoenderana nebasa rako rekutengesa. Pamwe ipapo, iwe unogashira iyo yese inodiwa data nezve indasitiri yakazara, kushanda kwemakwikwi, uye mukurumbira. Iwe unozogona kutarisa kufambira mberi pamasocial network, uchiwedzera kuvepo kwako imwe neimwe miniti.
SEO haizorasikirwe nehukuru hwayo muzana remakore makumi maviri nerimwe. Zviri nezve organic traffic iyo brand yako ichagashira kuburikidza neinjini dzekutsvaga. Semalt ichakubatsira iwe kutora chimiro chakasimba. Iyo diki yekudyara uye kushandira pamwe kwekudyidzana nehunyanzvi hwedu ichapa zvinoshamisa mhedzisiro. Kukanganisa kwako kwebhizimusi kunogona kubviswa zvakarongeka. Zvimwe zvinokundikana zvinogoneka, asi zano rakanyatsogadzirwa rinogona kuramba kushambadzira kwemusika. Sarudza maitiro anoenderana nemusika wako uye enda nawo.
Kuonekwa kwaSemalt kwakatemerwa nekusimudzirwa kweInternet. Bhiriji rakapinza harina kujairika, asi kana vari muchikwata chimwe, chishamiso chinoitika. Chishamiso chakaitika muna 2013 apo vanoverengeka vakangwara chaizvo vanhu vakasarudza kujoina mauto uye kugadzira Semalt. Iyo kambani ine vashandi vayo kupota nyika. Nhasi, vakomana vadiki uye vanovimbisa havafanirwe kuenda kumwe kunoratidza hunhu hwavo. Mumwe nemumwe wavo ane kumashure kwake / kwake kwakakosha dzidzo uye hunyanzvi mumapurojekiti eIT.
Kuti uone bhizinesi rako, haufanirwe kumira mumutsara. Iko hakuna kudikanwa kwekutsiva vhiri kuti rinyore kurapwa. Kuti usvike pane Google Zvikuru Mhedzisiro, iwe unofanirwa kusangana nenyanzvi dzeSemalt. Tine piritsi inobatsira mukukura kwako. Kurapa kwedu kunoshanda, kunyangwe ndudzi, nyika, kana kondinendi. Iwe unoda here kuti yako smartphone igamuchire mafoni kubva kune vatengi zvichiramba? Iwe unoda here kuti email yako izadzwe zuva nezuva nemazana emaema asina kuverenga? Iwe unoda kukwidzirisa chiyero chekambani yako kune yakakwirira mamakisi? Iwe unoda kuwedzera mari yako nemaviri, matatu, uye zvichingodaro? Zvese zvinhu zvakapusa. Kana iwe wagadzirira kukura bhizinesi rako, enderera kuverenga ichi chinyorwa.
Semalt SEO zvishandiso zvinoshandiswa nevatengi kubva kune gumi nemaviri nyika pasi rese. Unotaura Chirungu zvisizvo here? Vashandi vedu vachataura mutauro wako weko. Pa webhusaiti yekambani, iwe unogona kusvika pakuziva mumwe nemumwe wavo. Kune kuongorora kwevatengi vanoonga. Idzi hadzi dzakatangwa nyaya dzisina hwaro mune yezvinhu zvepasi. Iwe pachako unogona kushanyira nzvimbo dzemakambani akabudirira izvo Semalt yakabatsira kubudirira.
RUDZIDZO YENYAYA (Apple Service Center). Iyi kambani yeUkraine yakatora mukana weSemalt FullSEO uye ikawedzera traffic yayo kaviri mumwedzi gumi!
Zaodrasle.si. Kislovenia online zvepamhepo shopu yave ichipa zvigadzirwa uye masevhisi kwemakore matanhatu. Kwemwedzi gumi yekushandira pamwe neSemalt, saiti iyi yakawedzera organic yekutsvaga traffic ne520%, uye zvakare yakawedzera huwandu hwekushanya kwemwedzi wega wega na127. Nhasi, Zaodrasle.si ndiyo kambani inotungamira muSlovenia mumunda wayo.
Portal yekutsvaga nekutenga maflogeises. SEO Will Frankling anoti iyo yakazaraSESEO package yakabatsira bhizinesi rake kuwedzera huwandu hwemazwi akakosha muGoogle TOP-10 kusvika 5782, uye organic traffic ne303% kwemwedzi yekutanga ye9. Nhasi, iyi kambani ndiyo imwe yenzvimbo dzekutanga muindasitiri yefrancise muUnited Kingdom.
Chero chero munhu weInternet mushandisi anoziva iyo injini yekutsvaga iri. Chokwadi wakashandisa imwe yazvo. Nhasi kune zvakawanda zvavo, asi Google ndiyo inozivikanwa kwazvo. Injini yekutsvaga inoshanda sei? Iwe unopinda chikumbiro uye uwane rondedzero yemasaiti yakawanikwa neGoogle, Rambler, kana Yandex. Ona kuti mamwe mawebhusaiti anowira munzvimbo yekutanga, uye mamwe anoramba ari kumashure. Sezvinoratidzwa nehuwandu, chikamu cheshumba chevashandisi chinongovhura chete mabatani ari munzvimbo dzekutanga. Kuti upinde mu TOP-10, iwe unofanirwa kuita seti yezviyero zvekuwedzera nzvimbo yenzvimbo muGoogle-index yemibvunzo yakamboshanda.
Kubatanidza SEO zvishandiso
Semalt mainjiniya anoziva nzira yekuisa nzvimbo munzvimbo yekutanga muGoogle TOP 10. Isu tichawedzera zvakanyanya traffic uye online kutengesa. Kusimudzirwa kweInternet kunogona kushanda kune ese makambani ANO vateereri vangangotsvaga zvigadzirwa kana masevhisi paInternet. Maererano nehuwandu, nhamba yevashandisi veInternet iri kukura gore rega rega. Nhasi, vanopfuura chikamu chimwe muzvitatu chevagari vepasi vanoshandisa iyo Internet. Nei vateereri ava vachikwezva kwazvo kune rako bhizinesi? Inogona kubhadhara. Makumi nemazana ezviuru zvevashandisi zuva nezuva vanotarisa zvinhu zvako asi tsvaga vanokwikwidza nhumbi. Izvi zvinodaro nekuti vakwikwidzi vanoshanda zvakanyanya vakatotora nzvimbo dzakanakisa dzekutsvaga injini mhinduro. Iwe zvakare unogona kutora idzi nzvimbo muzuva. Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kutanga webhu saiti yekutsvaga injini yekugadzirisa.
Mune pfupi uye inowanikwa fomu, isu tichatsanangurira vashanyi zvauri kuita. Vhidhiyo yekusimudzira yebhizinesi rako ichabatsira kukwezva vatengi vatsva uye kuwedzera shanduko.
Kuongorora nzvimbo yekutengesa
Muzvinoitika zvazvazvino, ruzivo iropa reropa. Kushaikwa kwaro kunotungamira kune anemia. Kugara uchiziva uye kudzora bhizinesi rako, shandisa chinangwa chedu chekuongorora, uye kufanotaura nezve kufambira mberi kwako. Dzora bhizinesi rako repamhepo nenyanzvi dzeSemalt!
Anopfuura zviuru zvitatu emamiriyoni vanogona kuve vatengi havana hanya kutenga yako chigadzirwa. Nei vasingakwanisi kuita izvi? Mamirioni evanogona kukwikwidza haatenderi iwe kupinda muGoogle Pamusoro. Simudza bhizinesi kune yakakwira nhanho! Tsvaga nzira nyowani dzekushambadzira uye muhwina mukwikwidzi! Sei kuzviita? Sarudza nyanzvi dzechokwadi vane ruzivo rwakawandisa. Iva mutengi we Semalt nhasi! Semutengi, iwe uchagashira yakazara yakazara yemasevhisi, ayo anosanganisira kuvandudza, kugadzirisa patsva, nekusimudzira yako online shopu, pamwe nehunyanzvi hwekutsigirwa kwehunyanzvi. Nokusarudza Semalt, unogona nyore kumhanyisa bhizinesi rako repamhepo wova VANOGARA.
Vanoziva ruzivo vanoshuva kushandira pamwe newe mune chero nyika paPasi, gore rese kutenderera, chero nguva yakatenderedza wachi. Vanhu ava vanozogona kuzwisisa zvinoteedzera zverudzi rwe e-commerce.
Semalt portfolio inosanganisira anopfuura mazana masere ezviuru emakesi akapedzwa kune vanopfuura mazana matatu ezviuru vatengi. Mapurojekiti ese anowanikwa pane yedu pfuma.
Kuderera mari mukusimudzira yeprojekiti yako uye mhedzisiro yakanaka.
Isu tinogara tichishamisa vatengi vedu vane vanochinja-chinja mitengo uye zvakanakira mutengo unopa.
Chii chizere chekutsvaga Injini?
Iyo bhizinesi ichave iri pasi pekutonga kwemaneja maneja uye timu yedu yeSEO. Tichaongorora yako saiti kuti Google ifire uye tiite nzira yekutevera. Pakati pezvimwe zvinhu, Semalt nyanzvi dzinosarudza mazwi makuru epamusoro ayo ayo anokwezva anogona kutarisirwa vateereri. Tichaongorora mamiriro esaiti uye kugoverwa kwemashoko akakosha, pamwe nekusarudza mapeji ekusimudzira kunotevera kwemitsara yakakodzera. Izvo zvakakosha kuti uunganidze ruzivo maererano nevako vakwikwidzi kuti usangane navo vakazara vakashonga.
Maitiro ekugadzirisa sei webhusaiti yepamhepo?
Kuti utore mukana wechitoro chepamhepo pamusoro pevadzivisi, iwe unofanirwa kubvisa izvo zvinotadzisa zvinosimudzira kukurudzira. Isu tinopa akateedzana matanho anozoisa iwe munzvimbo yekutanga:
kugadzira meta tags inowirirana nemashoko akakosha;
kuvandudza HTML kodhi;
kugadzira tags uye hunhu izvo zvimiro zvezvino zvemagetsi ekutsvaga zvichasangana.
Kugadziridza kunoreva zvakare kuvhara zvivakwa zvakaputsika uye kugadzira huwandu hwakanyanya hwewakasimudzira zviwanikwa. Kugadzirisa marobhoti.txt uye .htaccess mafaira achagadzirisa zvakanyanya kuoneka kwenzvimbo yako mune yekutsvahisa injini peji peji.
Kune akawanda mazwi makuru uye mazwi, handiti? Kuchengeta iwe kubva mukuvhiringidzika uye kutemwa nemusoro, isu hatisi kunyora pano ese ese e "kurapa" matanho. Iye zvino iwe unoona kuti zvakaoma sei kutora nzvimbo yekutanga mukutengesa uye mukurumbira paWorld Wide Web. SEO kusimudzira inonyatsoda ruzivo rwakakosha uye rwakavakirwa pazivo yemapurojekiti apfuura. Chikwata chevechidiki, vanokurudzirwa, uye vanobudirira nyanzvi vakagadzirira kukubatsira iwe. Pamwe chete isu tichavhura iyo inoshanda SEO yekushambadzira uye toita kuti bhizinesi rako rionekwe kune vashanyi uye vanogona kuva vatengi. Kubudirira kunogoneka. Luck haunts nyanzvi. Chikwata cheSemalt chichava injini yako ine simba munzira yekurumbira uye kubudirira kana uchida.
Iwe unogona kugara chero munyika uye utaure chero mutauro. Unogona kugadzirisa Apple zvishandiso kuMinsk kana kutengesa zvivakwa muUSA. Tichazotsvaga mhinduro yebhizimusi rako uye nekusimudzira webhusaiti yako. Isu tinoziva kuti zvinoshanda sei nekuti tiri pros. Fungisisa rako bhizinesi uye ngatitarisei isu. Pamwe chete isu tichazadzisa zvimwe!